Hojjettoota - Sheer Itiyoophiyaa
Sheer hojjettoota isaa baay’ee dinqisiifata. Nuti seera bu’ura kaka’uumsa daldalaa sadarkaa qulqullinaa Dhaabbata Hojii Adunyaalessaa (ILO) tin hojiirra oolchinee jirra. Hojjettoonni Sheer hundinuu akka armaan gaditti ibsameen bu’aalee kallattii fi kallattiidhan alaa ni qabu.
Hojjettoota hundaaf kontiraata dhaabbataa argatu. Sheeriif hojjechuu jechuun mindaa sirrii, bakka buusa hawwachiisaa fi paakeejiwwan bu’aalee kanneen akka boonasii hojii irratti argamuu, mana jireenyaa/ciisichaa, fi kunuunsa fayyaa bilisaan argachuu jechuu dha.
Hojjettoonnikeenya waldaa daldalaa galuuf mirga qabu. Nuti gatii irratti wal falmuuf waliigaltee (CBA) qabna. fi Ijoolleen hojjettootaa irratti argamuu danda’umana barnootaa Sheerkaffaltii irraa bilisa(umuriin itti jalqaban 4).
Hojjettoonni haaraa qacaraman hundinuu leenjii siniina fi fayyaa fi eeggannoo guyyaa jalqabaa irratti argatu. Hojjettootaaf akka gahee hojii isaaniitti meeshaaleen barbaachisoo ittisoo dhuunfaa (PPE) ni kenninaaf.
Hojjettoonnitajaajilawwan bashannanaa fi gochaalee ispoortii kibabii Sheer isa akka gaariitti qabeenyaan guuttame keessa fayyadamuu danda’u. Istaadiyoomii Sheer.
Hojjettoonnikeenya koreewwan adda addaa keessa galuu ni danda’u:
waldaa hojjettootaa Waldaa hojjettootaa (Waldaa bu’uraa Sheer Itiyoophiyaa Dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa’ee
Koree piriimiyemii daldala sirrii
Koree nageenya hojiirraa fi fayyaa
Koree ispoortii fi bashannanaa
Koree farra Eedsii fi fayyummaa qaama wal hormaataa
Koree qacarrii fi koree naamusaa